Ligcine elakwethembisa umphakathi iphephandaba – Sivubela intuthuko Newspaper
ISIVUBELA Intuthuko iphephandaba lomphakathi ligcine lokho elakuthembisa umphakathi waKwaZulu-Natal ngobukhona bayo ngokungagcini ngokubhala izindaba zomphakathi kuphela kodwa libuye libheke emphakathini lelule isandla lapho kudingeka khona ikakhulukazi ukulekelela abafundi ezikoleni.
Leli phephandaba likwenze njenge nxenye yokugubha usuku nenyanga yamalungelo abantu, belihambele eMbitane Primary School ngokubambisana nezinkampani ezifana nabakwaVodacom kanye nosomabhizinisi uMkhucululi liyonikela ngezimfonyo, ama-sanitizers, izikhwama zokuphatha izincwadi nezicathulo kubafundi abahlonzwe ngothisha njengabaphuma emindenini edla imbuya ngothi.
UNkk Makhosi Mngoma uMhleli oMkhulu weSivubela Intuthuko uthe leliphephandaba izinjongo zalo ngukukhulumela nokunakekela umphakathi. Uthe kabafuni ukuphakela umphakathi izindaba kuphela kodwa bafuna nokuthi kube khona okuzuzayo ngalo njengoba liyingxenye yezimpilo zabo. “Sazibophezela ngokuthi okungenani njalo ngenyanga kube khona okuhle esikwenzela umphakathi ikakhulukazi izikole zalapha KwaZulu-Natal lapho sinabafundi baleli phephandaba. Ziningi izikole esesiye sazihambela siyonikela ikakhulukazi ngezinto ezimqoka kubafundi abangamantombazane njengoba beye bahlomule ngemisubelo (sanitary towel) nokunye kokubagcina bebahle. Yebo, ukuvalwa kwezwe nyakenye kusiphazamisile kwezinye izinhlelo ebesinazo njengephephandaba emuva kokubheduka kweCOVID-19. Siyathembisa ukuthi lokho esakusho ngeSivubela Intuthuko sizohamba emigomweni yakho ukuze umphakathi usizakele ngobukhona bethu siyiphephandaba. Kule zinyanga ezizayo sizohambela nakweziye izikole eThekwini njengoba sizoqala eNgonyameni nalapho siyokwenza lokhu esikwenzayo ezikoleni kokulekelela abafundi ngabakudingayo. Sikholwa ukuthi lokhu esikwenzayo kuyabethula umthwalo emahlombe abazali njengoba kwesinye isikhathi kuba nzima ukugcina zonke izidingo zezingane ikakhulukazi uma isimo singesihle ekhaya kwezezimali,” usho kanje.
UMnu Sihlesinenkosi Ngidi onguthishanhloko waseMbitane Primary ubonge ithimba leSivubela Intuthuko ngokuphonsa esivivaneli lelule isandla nasesikoleni asengamele ukulekelela abafundi. Uthe lokhu okwenzelwe abafundi kusho lukhulu kubona ngoba kunikeza ithemba lempilo kubafundi besikole sakhe. “Izandla sihlezi sizivulile ukulekelela esikoleni ngoba kuningi okwenza isikole siqhakaze kusukela ezindongeni kanjalo nabafundi abasemagcekeni. Ukuqhakaza kwesikole kunikeza ithemba ezisebenzini ezingothisha ngomsebenzi wazo kanjalo nabafundi bayakhuthazeka ukuba sendaweni enempilo,” usho kanje.